अमेरिकामा प्रेमीसंग कोठामा रंगे हात यस्तो अवस्थामा पक्राउ परेपछि भारत फर्किन प्रियंका – Classic Khabar
May 16, 2021 153
बलिउडसँगै हलिउडमा पनि ख्याति कमाउन सफल भएकी प्रियंका चोपडाले आफ्नो नयाँ पुस्तकमा जीवनका रोचक प्रसंगहरु खुलाएकी छिन्। पुस्तक ‘अनफिनिस्ड’ मा प्रियंकाले विद्यालय जीवनमा आफ्नो प्रेमीलाई घरमा बोलाएको र आफ्नी आन्टी एक्कासी घर आएपछि आफूले प्रेमीलाई दराजमै लुकाउने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेकी छिन्।
पुस्तकका अनुसार प्रियंकाको उक्त प्रेमीको नाम बब थियो। आफूले बबलाई असाध्यै माया गर्ने गरेको पनि उनले बताएकी छिन्। भारतीय संचारमाध्यम जुमका अनुसार प्रियंका र बबको कक्षा दशमा पढ्का प्रेम सम्बन्ध थियो। त्यसबेला प्रियंका आफ्नी आन्टी किरणसँग अमेरिकाको इन्डियानापोलिसमा बस्थिन्।
जुमका अनुसार पुस्तकमा प्रियंकाले लेखेकी छिन्,‘एक दिन बब र म हात पक्रिएर सोफामा सँगै बसेर टिभी हेरिरहेका थियौं। मैले झ्याल बाहिरबाट आन्टी आइरहेको देखे। म निकै डराएको थिए। त्यसबेला दिउँसोको २ बजेको थियो र आन्टी सँधै आउने समयभन्दा चाँडै आउनु भएको थियो। बब घर बाहिर जाने सम्भावना थिएन। त्यसकारण मैले बबलाई दराजमा लुकाए।’
पुस्तकमा उनकी आन्टीले दराज खोल्न लगाएको र बबलाई देखेको प्रसंग समेटिएको छ। पुस्तकमा भनिएको छ,‘मैले आन्टी त्यसरी रिसाएको कहिल्यै देखेको थिइन्।’
उक्त घटनापछि आन्टीले आमालाई फोन गरेर वृतान्त सुनाएको र त्यसपछि नै आफू भारत फर्किएको प्रियंकाले लेखेकी छिन्।
भारत फर्किना साथ प्रियंकाले मिस इन्डियामा भाग लिएको र मिस इन्डियाको ताज पहिरिएपछि नै उनले मिस वर्ल्डको उपाधि पन जितेकी थिइन्। मिस वर्ल्ड जित्दा प्रियंका १८ वर्षकी थिइन्।
Prevकोभिड १९ का कारण मृ त्यु भएकी छोरीको श व आफ्नो काँधमा बोकेर चि हान खोज्दै हिडेका बाबु
Nextदीपाश्री निरौलाको यस्तो खुलासा म अविवाहित हुँ, यौ न आनन्द पनि लिइरहेकी छु, तर कसरी ?
आफ्नो श्रीमानसँग लागेको भन्दै आरोप लगाएपछि सडक मै पर्यो कु टा कु ट, सासुले बुहारीलाई घर बाट निकालिदिन (भिडियो सहित)
बुवा बितेपछि आमाले पनि छोडेर अन्तै हिडिन्, १४ वर्षकी संगीताले यसरी सम्हाल्छिन् घरपरिवार
दिनभरी अर्कै केटा संग सुतेर आउथि राति एकलै सुत्थी,२ बर्ष सम्म मेरो श्रीमतीले मलाई छुन सम्म दिइन (1369)
ओलीले राजिनामा दिंदै, ओलीकै प्रस्तावमा यी नेतालाई बनाउने भए प्रधानमन्त्री ! ओलीको यो प्रस्ताव अहिलेसम्मकै नयाँ ! (867)
नायक किशोर खतिवडा आफुलाई गर्भवती बनाए भन्दै आरोप लगाउने लक्ष्मी गदाललाई भेट्न पुगे, भयो यस्तो बबाल (भिडियो हेर्नुस्) (832)